Polyetylen glycol 20000 - sifooyinka Badeecadani waa maadada cad ee granular. Ku milma biyaha, ku milma qaar ka mid ah dareeraha organic. Xalkeedu wuxuu leeyahay naftiis sare oo xoogsaariskeedu hooseeyo, waxaana lagu baaraandegi karaa isku darka, xoqidda iyo xoorida. Waa cusbi thermoplastic-ka oo iswaafajin wanaagsan la leh miraha kale. Waxay u adkeysaneysaa nabaad-guurka bakteeriyada waxayna leedahay daciifnimo hygroscopicity ee jawiga. Polyethylene glycol 20000 - Heerkaan sheygu waa isku dar ah ethylene oxide an ...
Polyethylene glycol 10000 - guryaha Wax soo saarkani waa maadada cad ee granular. Ku milma biyaha, ku milma qaar ka mid ah dareeraha organic. Xalkeedu wuxuu leeyahay naftiis sare oo xoogsaariskeedu hooseeyo, waxaana lagu baaraandegi karaa isku darka, xoqidda iyo xoorida. Waa cusbi thermoplastic-ka oo iswaafajin wanaagsan la leh miraha kale. Waxay u adkeysaneysaa nabaad-guurka bakteeriyada waxayna leedahay daciifnimo hygroscopicity ee jawiga. Polyethylene glycol 10000 - Heerkaan sheygu waa isku dar ah ethylene oxide an ...
Polyethylene glycol 6000 waxaa lagu diyaariyaa polymerization-ka dareeraha ethcolne glycol ee heerkulka sare, cadaadiska sare ama cadaadiska hooseeya. Polyethylene glycol 6000 (PEG-6000) Magaca Ingiriisiga: macrogol 6000-992 badeecadani waa isku dar ah ethylene oxide iyo polycondensation biyo, qaaciddada molecular waa ho (CH2CH2O) NH, halkaas oo n uu matalayo celceliska tirada oxyvinyls. dabeecad Badeecadani waa cad cad oo dufan adag leh ama budada granular, wax yar urin. Shayga waa lagu milmi karaa biyaha ama ethan ...
Polyethylene glycol 3350 - wuxuu adeegsadaa cusbada Poly (ethylene oxide) cusbi waa miisaan sare oo isku dheelitiran oo loo yaqaan 'homopolymer' kaasoo lagu sameeyay giraan furitaanka polymerization of ethylene oxide by catalysis heterogeneous. Midka hore waxaa loo yaqaan polyetylen glycol kan dambena waa polyoxyethylene. Polyethylene oxide (PEO) wuxuu leeyahay astaamaha ubaxyada, dhumucda, sii deynta gaabiska, saliidaynta, kala firdhinta, haynta iyo haynta biyaha. Waxay ku habboon tahay daawo, bacriminta kiimikada, sameynta waraaqaha, dhoobada, saabuunta, cos ...
Polyethylene glycol wuxuu leeyahay sifooyin kala duwan iyadoo kuxiran culeyskiisa molikiyuulka, laga bilaabo dareeraha dareeraha aan midabka lahayn iyo kuwa ur la'aanta ah ee dareeraha adag leh. Marka culeyska molikalku yahay 200-600, waa dareere heerkulka qolka ku jira. Marka culeyska molikiyuulka uu ka sareeyo 600, wuxuu si tartiib tartiib ah u noqdaa mid adag. Kala duwanaanta celceliska culeyska molikiyuulka, astaamaha sidoo kale way ka duwan yihiin. Laga soo bilaabo dareeraha dareeraha ah ee aan midabka lahayn iyo kuwa aan ur lahayn ee uumiga adag. Kordhinta culeyska molikiyuukalka, go'aanka hygroscopicity ...
Polyethylene glycol iyo polyetylen glycol fatty acid ester ayaa si weyn loogu isticmaalaa qurxinta iyo warshadaha dawooyinka. Sababtoo ah sifooyinka wanaagsan ee loo yaqaan 'polyetylen glycol', biyaha la dhalaaliyo, aan isbeddel lahayn, firfircoonaanta jir ahaaneed, khafiif ah, ubucnaan iyo qoyn, maqaarka jilicsan, dareenka isticmaalka wacan ee boostada, iwm. Nafaqada, nuugista qoyaanka iyo qaabdhismeedka alaabooyinka waa la beddeli karaa iyadoo la isticmaalayo polyetylen glycol oo leh darajooyin kala duwan oo miisaanka molikal ah. Polyethylene glycol (Mr <2000) oo leh relati ...
Peg-200: Waxaa loo isticmaali karaa dhexdhexaad ahaan isku-dhafka dabiiciga iyo xambaara kuleylka oo leh shuruudo sare. Waxaa loo isticmaali karaa sida humectant, dareeraha ku daraya milix dabiici ah iyo jaangooyaha nafwaayaha ee warshadaha kiimikada maalinlaha ah. Waxaa loo adeegsaday jilicsanaanta iyo wakiilka antistatic ee warshadaha dharka; Waxaa loo adeegsaday sidii wakiilka qoynta warshadaha waraaqaha iyo warshadaha sunta cayayaanka. Saliid aad u fiican, qoyaan, kala firidh, dhejisyo, wakiilo ka hortaga iyo jilciyayaal; Codsiga: Kiimikooyinka maalinlaha ah: daawooyinka ilkaha lagu ilaaliyo, qofka ...